Sibukeka sithanda ukuphuma ngempela emgqeni iSibaya - Bayede News
Sibukeka sithanda ukuphuma ngempela emgqeni iSibaya
ISibaya okungumdlalo wethelevishini oba phakathi nesonto kusuka ngoMsombuluko kuya koLwesihlanu singumdlalo ogxile embonini yamatekisi. Cishe yilokho okwenza abantu bawamukela ngesasasa ngesikhathi wethulwa okokuqala kuthelevishini. Wawuzobazisa ngokwenzeka emathunjini ale mboni okungavamile ukwenekelwa umphakathi. Nemibango eyasuka kamuva kukhona owayenesikhalo sokuthi akakhokhelwanga ngayekubiza ngamalungelo obunini bakhe balo mdlalo yakuveza ukuthi umdlalo kwasekuqaleni wawugxile embonini yamatekisi.
Lokhu kwenzeke kahle kuboniswa imibango eshisa phansi yokulawula le mboni phakathi komndeni wakwaZungu, nowakwaNdlovu nokwathi kamuva kwangena owakwaNgwenya. Imibango yemizila ibukeke iwenyusa umdlalo iwubeka ezingeni eliphakeme. Nokungenelela kongqongqoshe bakaHulumeni Wesifundazwe kwabukeka kuwushubisa lo mdlalo kwazise nakuye uHulumeni le mboni ibukeka iwuthi oluxake eguleni ngezinkinga nobudlova obungapheli obuhambisana nokulahleka kwemiphefumulo. Ngamafushane nje umdlalo wenza umqondo kubabukeli uma ugxile embonini yamatekisi.
Akuphikwa ukuthi ngobude bendlela emdlalweni kuningi okungenayo okungaphathelene ngqo nomongo womdlalo okuyilokho okwenzeka embonini yamatekisi. Yikho lokho okwenza ngesikhathi esiphambili ukuthi kuqondakale futhi kubekezeleke ukungena kobuthakathi bukaSunday Nkabinde endabeni. Kwakungenxa yobutha obushisa phansi kubalingiswa abamqoka endabeni okungoMpiyakhe Zungu noSamson Ndlovu. Ngamanye amazwi indaba ikhona ngoba kukhona abalingiswa abasemqoka endabeni okungoSamson Ndlovu noMpiyakhe Zungu futhi konke okuyisisusa sendaba kuyimboni yamatekisi.
Lapho ingosi yephephandaba iqonde khona le ngale ndaba isekuthini sengathi umongo weSibaya usuthanda ukulahleka. Lokhu kubukeka kudalwa wukuvilapha ukwenza ucwaningo kwabasingethe lo mdlalo. Uma kungenjalo kungenzeka ukuthi kunomkhankaso wokukhipha abalingiswa abathile nabayinhliziyo yomdlalo iSibaya. Izigigaba ezivelela abalingiswa abamqoka ngokwemboni yamatekisi zenzeka kanyekanye ngendlela esolisayo ukuthi kukhulu okungahambi kahle ngaphakathi kwalo mdlalo. Lokhu kwenza ukuthi kuchunyiswe izigigaba ezibukeka ziqhelelene nokungumongo womdlalo. Indaba yentombi kaQaphela nezidakamizwa akuyona ababukeli balo mdlalo abafisa ukwazi kabanzi ngayo. Miningi imidlalo ekuthelevishini ekhuluma ngezidakamizwa njengeThe Queen elandelana ezithendeni neSibaya kuChannel 161 kuDSTV. Indaba yokushada kukaNtwenhle neNkosi yaMabovu singaxoxelwa ngayo kodwa singabe sesidliswa yona zonke izinsuku sibe singaboni ukuthi ihlanganaphi nemboni yamatekisi.
Kuningi okwenzeka embonini yamatekisi ababukeli abangafundiswa ngakho. EThekwini kune “Go Durban” eGoli kune “Riavaya” okuyizinhlelo eziqophisana nemboni yamatekisi. Ukushiswa kwezitimela eKapa, eGoli naseMlaza kungeyithinte yini imboni yamatekisi ngandlela thile? Izingxabano phakathi kwemboni yamabhasi noma kungaseyena uGolden Eagle neyamatekisi kubangwa abagibeli nemizila neqhaza likaHulumeni ekwenzeni isiqiniseko sokuthi abagibeli abathinteki ezinxushunxushwini ezisuswa imibango embonini yezokuthutha kungabhalwa okuningi ngakho.
Iphephandaba linikeza inselelo kwabasondelene nalo mdlalo ukuthi benze okuthile ukubuyisela umdlalo emgqeni nasemgqigqweni okuyiwo. Kunokuthi uMpiyakhe Zungu kulokhu kuthithizwa ngendaba yakhe yebheyili ibe iyilungelo lomuntu elikuMthethosisekelo ngabe kungcono ukuthi uye phesheya uyofunda ngezindlela ezintsha zokuphathwa kangcono kwale mboni.
Ababhali bomdlalo abanakulawulelwa ukuthi umdlalo kufanele bawubhale ushone ngakuphi kodwa okwalo mdlalo sekuhlezi obala ukuthi abaphathi bawo banezinkinga eseziqala ukuhlala obala ngokhondolo oselulandelwa ngumdlalo.
Iphephandaba lithi okungabe konakele akulungiswe ngokushesha umdlalo ungaze uphelelwe yisithunzi kanti lona ngumdlalo othokozelwa zinkumbi zababukeli bethelevishini nosuwole imiklomelo. Abalingiswa abamqoka ababuyiswe nabenza ucwaningo bawenze ngokukhuthala umsebenzi wabo. Singababukeli asingaphathwa ngodaka emehlweni sibhekile.
Dez Khumalo Jun 7, 2019